Xubintii Ciyaaraha: Mauro Icardi ma Real Madrid baa? (dhegayso) – Radio Daljir
Xubintii Ciyaaraha: Mauro Icardi ma Real Madrid baa? (dhegayso)
Janaayo 31, 2018 1:14 b 0
Waxaa la ciyaaray kulamo ka tirsana horyaalka Ingiriiska kooxda Arsenal 1-3 ayaana guuldarro xanuun badan kala kulantay Swansea City. Arsenal oo sannadkan suuqa kala-iibsiga lacag badan galisay haddana waxaa halkii ka sii socda guuldarrooyinka isdabajooga ah ee ku socota Arsenal.
Real Madrid ayaa wakiilo u dirtay Talyaaniga si loo soo gabagabeeyo heshiiska ay ku doonayaan Mauro Icardi, kabtanka kooxda Inter Milano. Icardi oo sannadkii 2016 heshiis 5 sano ah u saxiixay Inter ayaa sidoo kale laga soo sheegayaa in uu aad u rabo kubiiridda Real.